Mpanamboatra jiro hafa tsy misy fipoahana - Shina Mpamatsy jiro hafa tsy misy fipoahana
Jiro tsato-kazo avo lenta mipoaka
1. Ampiasaina betsaka amin'ny tetikasa fiarovam-pirenena, injeniera aerospace, injeniera seranan-tsambo, fitehirizana, terminal entana mampidi-doza lehibe, fitrandrahana solika ary indostrian'ny petrochemical dia mila faritra midadasika amin'ny jiro afovoany;
2. Azo ampiharina amin'ny atmosfera entona mipoaka ao amin'ny Zone 1, Zone 2;
3. Azo ampiharina amin'ny atmosfera entona mipoaka II A, IIB, II C;
4. Mety amin'ny tontolo iainana vovoka 21, 22;
5. Azo ampiharina amin'ny fepetra fiarovana amin'ny toerana avo sy mando.
FCT95 andian-jiro fanaraha-maso tsy misy fipoahana
4. Mety amin'ny tontolo iainana vovoka mirehitra ao amin'ny faritra 21, 22;
6. Mety amin'ny jiro fanaraha-maso finday.
BSD4 andian-jiro tsy mipoaka
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, indostrian'ny simika, tontolo iainana ara-tafika sy mampidi-doza hafa ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho an'ny jiro sy jiro miasa;
BSD4 andian-jiro porofo fipoahana tetikasa
BAD63-A andian-jiro an-dalambe tsy mipoaka amin'ny masoandro
1. Ampiasaina betsaka amin'ny tontolo mampidi-doza toy ny fitrandrahana solika, fanadiovana, simika, sehatra miaramila sy offshore solitany, tanky solika, sns. Fahazavana ankapobeny sy fampiasana jiro miasa;
2. Azo ampiharina amin'ny tetik'asa fanavaozana mitsitsy angovo sy toerana sarotra fikojakojana sy fanoloana;
3. Mihatra amin'ny Zone 1 sy Zone 2 amin'ny tontolo iainana entona mipoaka;
4. Azo ampiharina amin'ny tontolo iainana entona mipoaka IIA, IIB, IIC;
5. Azo ampiharina amin'ny faritra 21 sy 22 amin'ny tontolo iainana vovoka mora mirehitra;
6. Azo ampiharina amin'ny toerana misy fepetra fiarovana avo sy hamandoana;
7. Mety amin'ny tontolo iainana ambany hafanana mihoatra ny -40 °C.
Fandefasana acoustic-optic annunciator an'ny FCBJ
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, simika, miaramila ary tontolo mampidi-doza hafa ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana mampidi-doza hafa ho an'ny fanairana famantarana loza na ho famantarana famantarana;
ABSg andian-jiro Fanaraha-maso tanky porofo mipoaka
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, simika, miaramila ary toerana mampidi-doza hafa ho an'ny tanjona jiro eo an-toerana;
AD62 andian-jiro tsy mipoaka
1. ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, indostrian'ny simika, miaramila sy tontolo iainana mampidi-doza ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho an'ny jiro sy jiro miasa.
3. Atmosfera mipoaka: kilasy ⅡA,ⅡB, ⅡC
5. Mety amin'ny fepetra fiarovana avo, toerana mando;
BHZD andian-jiro mipoitra amin'ny aeronautika manjelanjelatra
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, simika, miaramila ary tontolo mampidi-doza hafa ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho fampitandremana;
2. Azo ampiharina amin'ny trano avo, sehatra fandavahana, trano avo ary trano fitehirizana solika avo amin'ny tranobe, ny torolàlana momba ny fampiasana sakana amin'ny fiaramanidina.
3. Mety amin'ny tontolo iainana entona mipoaka faritra 1, faritra 2;
4. Atmosfera mipoaka: kilasy ⅡA,ⅡB, ⅡC;
5. Mety amin'ny tontolo vovoka mirehitra ao amin'ny faritra 22, 21;
6. Mety amin'ny fepetra fiarovana avo, toerana mando.
BAL andian-dahatsoratra tsy mipoaka ballast